Setha umugqa wokukhiqiza izinkukhu ezi-1PTH
NgoMashi ,Umshini we-VICTOR pellet unikele ngomugqa wokukhiqizwa kokudla kwezinkukhu kumakhasimende e-Afrika,etholakala yiMozambiki.it ikakhulukazi ukukhiqiza i-pellet yokudla kwenkukhu kanye ne-pellet feed yenkomo.
Ngokuvamile, inqubo yokukhiqizwa kokondla izinkukhu inezinyathelo ezilandelayo:
1.Ekuqaleni, izinto ezingavuthiwe noma izinto zokuphaka ezidingekayo ezilwaneni zichotshozwa zibe yimpuphu ngomshini wokugaya, njengokudla k soya, ukolweni, ukolweni, imifino nezinye izinto
2.Ngemuva kwalokho, emshinini wokuxuba, Amaphawundi we-raw impahla eluhlaza oxutshwe oxutshwe ngokuphelele nenqubo yokukhiqiza kamuva ye-pellet. Kule nqubo, umsebenzisi angangeza ama-ejenti wokungezelela njengevithamini, impuphu, ithambo nezinye izinto ezidingekayo zokulandela umkhondo
3.Olandelayo, izinto zokuxubha ezihlanganisiwe zingena emshinini wokuphamba wezinkukhu wenza umshini wokuhambisa. Ngaphansi kwezinga lokushisa eliphakeme nengcindezi ephezulu ngaphakathi komshini, izinto ezikhululekile zicindezelwe zibe yi-penst ephezulu yokuqina kwabantu obukhulu obufanayo nomumo.
4.Ngemva kwalokho, okuphakelayo kwe-pellet kuqediwe futhi kwahlolwa kumshini opholile we-pellet kanye nomshini wesikrini wokufaka kamuva nokupakisha.
5.Ekugcineni, ngokusebenzisa ukupholisa nokuhlola, okuphakelayo kwe-pellet kungapakishwa ezikhwameni zokubeka.isikhwama esipakwe ngopeleti sikulungele ukuthengisa emakethe.
Kuleli khasimende laseMozambiki, sinemininingwane eminingi ngentuthuko yokuphakelwa kwezinkukhu eMozambiki. Ngenkathi ngesidingo esiguqukayo senkukhu yokudla okunempilo, Uhlobo lokuphakelayo kwendabuko alunakuhlangabezana nentuthuko yamanje kanye nemfuneko.
Ngenxa yokufunwa okwehlukile kwenkukhu nenkomo, eyedlule idinga inani eliphakeme lamaprotheni ezilwaneni, i-protein supplementation ivame ukwedlula amazinga wezakhi, kanjalo ne phosphorus. Ukusetshenziswa kwe-nitrogen ne-phosphorus kokuphaka ifomula okuphelele kuba okubaluleke ngokwengeziwe.kwamanje lokhu kokugcina kudinga ikhwalithi yokuphaka okungafunekiyo.Ukuphakelwa kokudla okufana noklaba noma ummbila wesilenge njengamanje kubangela iningi lokuphakelwa okuhle, kodwa ikhwalithi yayo nenani lokuphakelayo lingahluka kakhulu. Bese izimfuno ezahlukahlukene zibuze izinqubo ezihlukile. Ngokuya ngesimo nezidingo zangempela,I-VICTOR PELLET MACHINE isuse umugqa wokukhiqizwa kwezinkukhu ezi-1PHT ngesakhiwo esihle.
Ngemuva kokuhlolwa kokusebenza komugqa wokukhiqizwa wokuphakelwa kwezinkukhu ngokwezifiso, umphumela ungaphezu komphumela olindelekile, futhi ikhasimende lisithumelele izithombe, ukusho ukuthi umugqa wokukhiqizwa kokudla kwezinkukhu kuyamangaza, futhi angathanda ukusetha enye imishini emayelana nokukhiqizwa kwezinsiza zokuphakelwa kwezinhlanzi.